Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Mampahafantatra an'i Nizza DOCG, Italia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Vaovao farany Italia • Vaovao • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Divay & Fanahy
Alessandro Masnaghetti, Mpamorona Sarintany Vineyard sy Gianni Bertolino, Tenuta Olim Bauda
Mianatra amin'ny Sipping
Izay tsy fantatro Nizza DOCG talohan'ny nanatrehako ny Master Class tao Manhattan dia nameno boky iray farafahakeliny (roa azo inoana fa roa).
Voalohany indrindra - aiza izany? Nizza Monferrato dia miorina ao amin'ny faritanin'i Asti eo anelanelan'ny havoan'i Asti, Alba, Alessandria ary Acqui Terme, ary ekena ho anisan'ny Lova Iraisam-pirenena UNESCO. Ny tantara dia manondro fa Nizza Monferrato dia naorina tamin'ny 1225 taorian'ny nandravana ny lapa sasany tao amin'ny faritr'i Alessandria. Ny Abbey an'i San Giovanni any Lanero, akaikin'ny renirano Belbo, no lasa afovoan-tanàna.
Taorian'ny fikorontanana sy faharavana nandritra ny taona maro, dia navaozina ny tanàna ary naverina tamin'ny laoniny noho ny House of Savoy (taonjato faha-17 sy 18), nanjary fantatra tamin'ny famokarana landy. Zava-dehibe ihany koa ho an'ny milisy izany ary nanome ny medaly volafotsy ho an'ny valin-tafika rehefa nanohitra ny Fasisme (Ady Lehibe Faharoa).
Ny faritra Nizza dia ambany noho ny tanim-boalobok'i Barbera any Alba ary miaina vanim-potoana mafana kokoa. Nizza Monferrato dia misy tanàna 18 amin'ny 160 ha. Amin'izao fotoana izao dia misy mpamokatra 43 ao amin'ny Nizza DOCG divay fikambanan'ny mpamokatra.
Fa maninona i Nizza? Nizza no anaran'ilay renirano mamakivaky ilay faritra manolotra fanondroana fohy sy manintona avy amin'ny boky ara-jeografika tsy azo ovaina izay mora tadidy… .ary tsy mbola nisy izany ho an'ny divay, ka nitantara ny tany, divay ary mpamokatra. mora kokoa.
Ny voaloboka Nizza dia mila masoandro ary noho izany dia hipetraka amin'ny tampon-tehezana izay atsinanana atsinanana atsinanana andrefana, tsy ankanavaka ireo lohasaha. Ny faritra famokarana (Tertiary Piedmont Basin), dia faritra be havoana iray izay avy amin'ny fiakaran'ny ranomasina nandritra ny vanim-potoanan'ny Tertiary. Ny tany dia mikarakara, lalina lalindalina, ary miavaka amin'ny marbra-tanimanga sy vato fasika voafantina. Ny voaloboka Barbera no voaloboka mena nambolena indrindra any amin'ny faritr'i Piedmont any Italia
Nizza Leadership. Ny mpilalao lehibe amin'ny fahazoana ny anarana DOCG ho an'i Nizza dia i Giulano Noe, mpahay fizika malaza amin'ny consultant ary i Michel Chiarlo, mpamokatra divay mpisava lalana ao amin'io faritra io ary ny filoha voalohan'ny Associazione Produttori. Chiarlo dia nanomboka ny famokaram-boalobony manokana tamin'ny 1956 ary izy no iray tamin'ireo voalohany nampiditra fanala malolactic ho an'i Barbera (1974). VAKIO NY ARTICLE TRANO AO WINES.TRAVEL.